Izicelo ezi-3 zokuhlela umsebenzi wakho | Bezzia
UMaria vazquez | 13/10/2021 10:00 | Owesifazane ophethe
Ukuthi usebenza ngaphandle kwekhaya yini sengathi ushaya ucingo Siyaqiniseka ukuthi uzokuthokozela ukwazi izicelo esiziphakamisayo namhlanje ukuhlela umsebenzi wakho. Futhi yilokho miningi imisebenzi esihlala kuyo nsuku zonke Futhi asihlali njalo sinethuluzi elifanele lokukwenza.
Ukuhlela imisebenzi yansuku zonke, ukuphatha amaphrojekthi nokwabela phansi umsebenzi ngokwabelana ngemisebenzi nabanye ozakwethu kuyinto ezoba lula kuwe ngeizicelo zokuhlela umsebenzi wakho zazo sikhuluma nawe namuhla. Ungazifaka futhi kuselula yakho, ikhompyutha yakho ne-iPad yakho, ukuze uthole induduzo enkulu. Zitholele!
Todoist kuyinto ithuluzi lokuphatha umsebenzi Ngomklamo olula okusiza ukuthi uphinde uthole ukucaciseka kwakho nokuthula kwengqondo ngokukhipha yonke imisebenzi ekhanda lakho ukuyifaka ohlwini akunandaba ukuthi ukuphi noma ukuthi usebenzisa yiphi idivayisi.
Leli ikhalenda eliphelele kakhulu, uhlu lomsebenzi kanye nohlelo lokusebenza lwamanothi ekunikeza amathuluzi angapheli ukuhlela imisebenzi yakho nemisebenzi. Ungazihlukanisa ngamaphrojekthi, amalebula namazinga okubekwa phambili, kanye nokubanikeza usuku olufanele noma isikhathi uma kuyimisebenzi ephindaphindwayo. Ngakho-ke uzoba nombono ocacile wakho konke okumele ukwenze ngaso sonke isikhathi futhi awusoze walahla umkhondo wemisebenzi ebaluleke kakhulu.
Ngalolu hlelo lokusebenza ungaphinda wenze lula indlela yakho yokusebenza ukuyixhumanisa namafayela akho, i-imeyili nekhalenda. Lolu hlelo lokusebenza futhi lusiza ukuthi uphathe amaphrojekthi amakhulu ngokukuvumela ukuthi uwahlukanise futhi unikeze imisebenzi kwamanye amalungu eqembu. Hlukanisa futhi unqobe imisebenzi yakho yansuku zonke kumaphrojekthi abiwe!
Iningi lalezi zici litholakala mahhala, kepha ungathola ezinye eziwusizo ukubhalisela i-akhawunti Pro (€ 3 / ngenyanga) noma Ibhizinisi lamaqembu (€ 5 / ngenyanga). Lokhu kukunikeza kusuka kuzihlungi zangokwezifiso kuya kuzifanekiso zeprojekthi kanye nezibalo zokukhiqiza, phakathi kwezinye izici.
Enembile futhi enethezekile, u-Evernote uzokusiza ukuphatha nokuhlela imisebenzi yakho. Ngaleli thuluzi ungazenzela uhlu lwakho lwezinto okufanele zenziwe, hlela ama-aphoyintimenti ekhalendeni, uqoqe futhi uthwebule imibono ngezindlela ezahlukahlukene nangendlela efanayo idijithali imibhalo yakho ngekhamera kusuka kufoni yakho ephathekayo.
Ukuze usebenzise uhlelo lokusebenza ngokunethezeka kuwe, unga xhuma i-akhawunti efanayo ye-Evernote kumadivayisi akho ahlukile: iselula, ikhompyutha nethebulethi. Ngale ndlela uzohlala ugcina imininingwane ebalulekile kutholakale kalula: amanothi akho avumelaniswa ngokuzenzakalela kuwo wonke amadivayisi akho. Amanothi, ngasendleleni, lapho ungangeza khona umbhalo, izithombe, umsindo, ukuskena, amafayela e-PDF nemibhalo.
Dala futhi unikeze imisebenzi ngaphakathi kwamanothi akho nge izinsuku ezifanele, izaziso nezikhumbuzo ukuze kungaphunyuki lutho kuwe futhi kwandise umkhiqizo wakho! Ungayenza ngohlelo lwayo lwamahhala noma usebenzise uhlelo lwayo lomuntu siqu noma oluthandayo, ngo- € 6,99 no- € 8,99 ngenyanga, ngokulandelana.
I-Trello yisicelo esingumakadebona sokuphathwa kwephrojekthi ebesithola ukubaluleka njengoba kwenziwa ngocingo. Uhlu namakhadi yizinsika zenhlangano lapho amabhodi alolu hlelo asekelwe khona.
Nika imisebenzi, setha izinsuku zokugcina, hlola amapharamitha womkhiqizo, setha amakhalenda nokunye okuningi ukubona ukugeleza komsebenzi okuthuthuke kakhulu. Amakhadi we-Trello afana nenhlangano, njengoba evumela phatha, qapha futhi wabelane ngemisebenzi kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni. Vula noma yiliphi ikhadi ukuthola i-ecosystem yohlu lokuhlola, izinsuku ezifanele, okunamathiselwe, izingxoxo nokunye okuningi.
Yize uTrello eyisihleli somuntu siqu esisebenzisekayo, isetshenziswa kangcono ngokusebenza njengeqembu. Bheka imisebenzi yeqembu lakho ukusebenza nokukwazi ukubona ukuthi amakhadi ahamba kanjani phakathi kwamalungu ahlukene aze aqedwe kuyinto ongayenza ngisho nange-akhawunti yakho yamahhala. Kepha uma udinga okuningi, ungaqasha uhlelo lwabo lwePrimiyamu, olulungele amaqembu afinyelela kubantu abayi-100 okufanele bagade amaphrojekthi amaningi.
Noma ngabe usebenzela omunye umuntu ehhovisi noma ekhaya, sengathi uzisebenza noma usebenza ngokuzimela. Lezi zinhlelo zokuhlela umsebenzi wakho zingahlelela usuku lwakho nosuku. Futhi zonke zinembile kakhulu, zizame!
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Indlela yokuphila » Owesifazane ophethe » 3 zokusebenza ukuhlela umsebenzi wakho